Ihe nzuzo ike nke pyramid - AFRIKHEPRI
Nzuzo nke Energy Pyramid
egwu UZI NA NDỊ EZIOKWU
Pyramids nke Giza
I meghachiri "Nzuzo nke Ike Pyramid" Sekọnd ole na ole gara aga
Pyramid nwere ihe ọ bụla nwere ume? Nke a bụ ihe a ga-agụ n'ọtụtụ akwụkwọ ntuziaka. Kemgbe ochie, ọ na-anọchite anya ebe kachasị anya na mmekọrịta kasị mma n'etiti ike na nguzozi. O gosiputara na ndi ochie nwere ihe omuma banyere iwu ndi di omimi nke eluigwe na ala ma nwee ike inweta uwa nke ike di omimi. Omenala dị iche iche dị n'akụkụ dị iche iche nke ụwa, nwere ike inwe ihe dị iche iche dị iche iche dị iche iche: ọdịdị ọdịnala dị na Egypt na China na-emegide pyramid cone nke a na-akpọkarị na Central na South America.
Ihe omuma abuo abuo di oke mkpa n'ihi na ike sitere na ya di iche.
Ike nke pyramid
Ịgba ụra (kamakwa kinesiology) nwere ike igosi ọrụ dị mkpa nke pyramid na-eji ike. N'okwu a, ọ bụghị okwu nke ike a maara, nke a na-ahụ site na ngwa nkịtị, mana nke ike aghụghọ nke naanị radiesthesic pụtara ma ọ bụ mmetụta ha nwere na gburugburu ebe obibi maọbụ ihe dị ndụ. A pụrụ imetụta ihe ndị a na laabu na ụdị dịgasị iche (na ihe ndị na-anọchite anya ọdịdị ahụ na oghere mgbochi, ma ọ bụ n'akụkụ na mgbidi siri ike). Tụkwasị na nke ahụ, ihe ndị e nwetara nwetara ugboro ugboro na oge ọbụla. Ihe pyramid ahụ na-arụ ọrụ na ike dị ka ihe mgbagwoju anya, dị ka ihe na-akwakọba ma ọ bụ dịka ọta dị ike, dabere n'otú e si etinye ya na gburugburu ebe obibi.
Mmetụta dị ọcha nke pyramid
Nkà mmụta sayensị ịzọrọ ihe na-akọwa na pyramid ahụ na-ebute ebili mmiri nke ya (lee Gburugburu: Mmiri na-emebi emebi) na nke na-adịghị mma maka ihe dị ndụ. Mana nke a na-apụta mgbe pyramid nọ n'ọnọdụ dị ka otu eserese nke na-ewere dị ka ihe amaokwu ndị isi.
Nke a bụ ihe na-egosi na ebili mmiri na-arụpụta ihe dị n'etiti ọdịdị geometric nke ihe na mbara ala magnet, nke ejidere ya, "asịrị" ma weghachite ọzọ, ya nwere àgwà ya . Akara pyramid a ma ama, bidoghachi ihe karịrị ugboro iri isii na Egypt na Palestaịn mgbe oge mmepe (lee pyramid nke Joser) bụ nke e nyere, nke dị n'elu, na pyramidion oge ochie (a na-akpọ ben ben).
Ọ bụrụ na ọ na-etinye ya na ihu anọ ọ bụla na-eche ihu okwu anọ dị na anọ, ọ naghị ebunye ọ bụla ebili mmiri ọ bụla ma nọgide na-emepụta ume niile n'ime usoro ya.
Nke a pụtara na ọ bụrụ na etinyere ya ọnụ, ọ na-egbochi mkpali na-ezighị ezi ma ọ pụtaghị.
Ihe nyocha nke radiesthetic rụrụ n'ime pyramid Cheops (yana pyramid ndị ọzọ nke otu ụdị) egosiwo na netwọk ike nke gbara ụwa gburugburu, dịka netwọk Curry na Hartmann, abụghị adịghị anọ n'ime pyramid ahụ. Otú ọ dị, atụmatụ dịgasị iche nke ụdị pyramid ahụ, Otú ọ dị, na-akpata nsị nke ụdị dị iche.
Ọtụtụ okwu nwere ike ime:
1) ma e wezụga eziokwu ahụ bụ na a na-eche ihu ihu na isi okwu;
2) enwere ike ichikota pyramid ahụ na vertexes nke square nke isi ahụ na isi ihe anọ dị na isi: na nke a, ọ gaghị enwe ebili mmiri ọ bụla e bipụtara, kama, ihe ọ bụla ụdị ume dị na ya N'ime pyramid (nti ma ọ bụ na-adịghị mma) a ga-ahapụ ya kpam kpam n'èzí; 3) pyramid ahụ bụ axis ma e jiri ya tụnyere ihe ngwọta abụọ gara aga: ọ bụghị naanị na ọ ga-ahapụ ike ya (ma ọ bụ ọnọdụ ya) na-emetụ, ma ọ ga-egosipụtakwa àgwà ọjọọ nke ebili mmiri nke aka ya.
Ogwu pyramid ahụ
The truncated pyramid feature pyramidal owuwu nke Central America (Aztec mmepeanya) ma ọ bụ South, ọnọde otu atụmatụ dị ka omenala pyramid positioned na vertices nke isi dabeere n'ebe anọ bụ isi ihe, na-igbochi ya mere ọ dịghị ụdị ike.
Tụkwasị na nke ahụ, ọ na-ebunye ike dị n'ime ya.
Ọ na-akpali mmasị ịtụgharị uche na ọrụ nke pyramid nke Central America. N'ezie, n'ugwu ndị e debere n'elu ọnụ elu ha, e gburu mmadụ (puku kwuru puku na puku mmadụ n'etiti ndị Aztek). Otú ọ dị, pyramid ahụ na-enweghị atụ nwere ikike ịchịkọta ike (dịka geotelluric si gburugburu gburugburu ebe obibi) ma rụọ ọrụ ya n'elu, ebe a na-achọta ndị a chụụrụ àjà. Na nke a, ndị nchụàjà na-adịkarị na-anọchi anya iferi (ha na-mma na mmekọrịta ya na ike nke ebe) na-atụkwasị ntekwasa (ha nwere iji chebe onwe ha megide a ọnọdụ tara) mgbe ahụ tara ka iferi (ahọrọ dị ka ndị polarity kwesịrị ekwesị). Àjà a na ike na interacts dị ka a mkpali n'etiti ọjọọ gboo anakọtara na gburugburu ebe obibi na atumatu olu upwardly na nti gboo nke chetara ume ubi si n'elu na ala, iji hụ neutralization nke-eguzogide ma na emeziwanye ike gburugburu ebe obibi.
Ụfọdụ nnyocha ndị na-adịbeghị anya
Dika Dr. Philip Callahan si kwuo, ihe nkocha oji - nke eji mee ulo nke ndi eze nke nnukwu pyramid - bu otu n'ime ihe ndi kachasi aka. O turu ugwo nkume, nke kpuchiri Pyramid Ukwu, bu diamagnetic. Paramagnetic kwuru nke a umi nke enweta a magnetization n'otu uzo ka ndọta nke ọ na-mikpuru, ma na tụfuru a magnetization mgbe e si champ.Si magnetik oge bụ efu: ihe bụ diamagnetic. Mgbe a na-na mpụga ndọta, ọ mkpatụ weakly site na-eke a ndọta-abụghị (a bụ n'ihi na deformation nke elektrọn n'ígwé ojii) The cone udi na pyramidal udi na-emekarị weere dị ka ume Ẹkot . A na - ekwu ha abụọ ka ha na - ebunye oghere ngwugwu nke apex.
Ị nwere ike ịhụ ebe a foto nke Kirlian na-egosi oké ifufe nke ike na helix ugboro abụọ si n'elu pyramid pụta.
Akwụkwọ akụkọ Mary na Dean Hardy si Allegan Michigan.
The Hardys weghaara ego ọla-edo ma tinye ya n'osisi eze nke nnukwu oyiri nke Pyramid zuru oke. Ka oge na-aga, mkpụrụ ego ọlaedo ahụ na-etinye 'mmanụ' n'elu ala. Onye na-eme nchọpụta ọzọ gosipụtara nnwale a na pyramid ọzọ. Nke a na-adabere n'ọrụ Dr. Dee Nelson nke 1979.
A na-etinye Ụlọ ọrụ Tesla ma ọ bụ Coil Tesel n'ogo nke Ụlọ eze. Ọ na - emepụta elekere abụọ ma ọ bụ mgbe ọ bụla atọ eletrọniki jikọtara na resonance. Nyocha a bụ onye ọkà mmụta sayensị American-Serbian Nikola Tesla gburugburu 1891. A na-eji ya emepụta nnukwu voltaji, ala, na ugboro ugboro dị ugbu a.
Joshua Gulick na-atụ aro na pyramid bụ "ọkụ nzuzo" nke ndị ọkachamara. Ọ na-ekwu na o jiri ọkụ nzuzo a kwatuo ọlaedo ahụ n'ime ọlaedo nke edo edo na mmanụ a na-acha edo edo, nke mbụ n'ime ọcha ntụ ntụ, mgbe ahụ, ọbara uhie. A na-akọwapụta ngwaahịa ndị a nke ọma na alchemical akwụkwọ dị ka ihe dị n'akụkụ nkume onye ọkà ihe ọmụma. Dị ka Jọshụa si kwuo: "Ihe nzuzo dị omimi nke mmanya bụ ihe a na-akpọ" ọkụ nzuzo ", ihe nwere ike, ka oge na-aga, gbasaa ọlaedo n'ime ntụ ọcha. A na ekwu na usoro a "agwụ" n'enweghị mmekọrịta mmadụ. A na-ekwukwa na usoro ahụ bụ "egwuregwu nwatakịrị," ọ bụ n'ezie. Ihe nzuzo nke ọkụ nke na-ekpuchi ọlaedo bụ ike sitere na ụdị pyramidal. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, a na-asụgharị "pyramid" ahụ dịka "ọkụ n'etiti. "
Eji m otu mpempe ọlaedo kwadoro n'etiti etiti pyramid asatọ dị elu na ngalaba nke ọla kọpa tube. Mkpụrụ ego ahụ na-ekpuchi mmiri mmiri nke na-agbaze na ntụ ọcha. Ọ bụghị maka ụbụrụ ka ụlọ ahụ dị na ikuku ikuku na iru mmiri dị ala. Eji m ụlọ ahụ kpochapu, mmiri mmiri / ntụ ntụ na-apụtakwa. Nke a abụghị ihe a na-akọkarị banyere ọlaedo, mana ọ na-akwado kpamkpam na nke mbụ nke usoro alchemical, n'ụzọ doro anya metụtara akụkụ Akwụkwọ Nsọ m mụtara. "
Dị ka ndị edemede ndị ọzọ si kwuo, ọ bụ ụdị ume a nke eji mee ihe iji levata mbadamba nkume mgbe a na-ewu pyramid.
Dị ka ndị dere akwụkwọ ahụ bụ "Pyramid Energy" si kwuo, a na-eji foto ahụ a na-akpọ Caduceus Spool mee ihe iji chebe bọmbụ nkume ndị e ji rụọ pyramid. E wuru okporo ụzọ ahụ, nke e ji ahịrị dị iche iche nke sphinxes, tinyere nke a na-akpọ solitron kere vortex gburugburu, ma na-akwado ya site na ikuku generator.
Antenna abụọ nke otu "vortex" weghaara nkume.
Ndị ụkọchukwu Ijipt na-eji ụrọ ndị a eme ihe, nke na-agafe (n'aka ekpe) na ihe onwunwe (n'aka nri). Ejiri ihe eji eme ihe bu "ihe di nsọ" ma weputa ya na netwọk nke uwa. Ihe mere ndị ọkà mmụta sayensị taa enweghị ike ịmepụta ihe a dị mfe n'ihi na "ha amụtaghị ike nke a na-akpọ nnwere onwe electromagnetic terrestrial. Hardy & Killick na-akọwa n'ụzọ doro anya:
"Ndị oge ochie jiri netwọk a iji nweta levitation na nkwurịta okwu gburugburu ụwa. Nke a bụ ihe mere achọta pyramid n'ụwa niile. The pyramid nke Cheops dị n'Ijipt na-arụpụta igbe na e wuru ya iji banye n'ime nchịkọta Ụwa. Ogwe nke isi nkuku a bụ Igbe nke Ọgbụgba Ndụ ahụ. [Hardy & Killick, Pyramid Energy, p. 165. p. 169]
Ahụmahụ ụfọdụ na pyramid
Kedu ka o si bụrụ pyramid dị mfe nke kaadiboodu na-eme ka agụba agụba jiri? ma ọ bụ jikwaa mikpuo otu mpempe anụ n'ime n'ime? Gịnị mere ụfọdụ mpịakọta na-eji enweta ike nke amaghị ama ma bụrụ nke a pụrụ ịmepụta? Ọ bụ enigma nke "ebili mmiri nke ụdị", na ihe ndị a ma ama na ha yiri ọrụ nke na-ebute n'ebe ahụ. A omimi na sayensị ga-akọwa ụfọdụ nke ihe n'oge ochie mepee ama ikekwe chọpụtara nzuzo ... Na folder n "91304, Office nke mepụtara nke Prague, nke ahụ bụ nkọwa nke a nnọọ ihe ọhụrụ ngwaọrụ E gosipụtara na prosaicly na ihu ihu dị ka nkuzi nkuzi. Ejiri engineer nke aha ya bụ Karel Drbal, nke a maara nke ọma na Czechoslovakia, debere usoro ahụ na 1959 n'ihi na ọ bụ, n'etiti ndị ọzọ, maka ọrụ nke netwọk telivishọn telivishọn. A kọwara onye nkuzi dị ka pyramid nke kaadiboodu ma ọ bụ plastic nke na-etinye 23,40 cm n'akụkụ 15, 10 elu. O nwere isi ihe, nke mbughari. nke a na-etinye ya dika mgbịrịgba. Na nke a na-adọta ndị nọ n'etiti ha, ma na nkwụsị ha bụ ntakịrị ihe dịka otu egwuregwu. A na-akọwapụta na akụkụ nke njedebe ndị a abụghị ihe dị egwu ma ha ekwesịghị igafe 6.50 cm n'ịdị elu. Ihe kacha mma bụ 5 cm. nke kwekọrọ na nke atọ nke pyramid ahụ.
Iji usoro. ị chọrọ compass. n'ihi na a na-eme pyramid ahụ nke mere na otu n'ime etiti dị kpọmkwem n'ebe a na-ede edere edere n'ebe ndịda. Ọ dịkwa mkpa ịhapụ ngwaọrụ ọ bụla eletriki ma ọ bụ ngwaọrụ. A na-etinye ihe agụba ọkụ na-adabere na 5 cm, oghere ndị na-egbu ya chere ihu n'ebe ọwụwa anyanwụ na n'ebe ọdịda anyanwụ. Tinye pyramid ahụ n'elu isi ya karịa ọdụ ma chere ụbọchị isii. A na-amụba agụba. Drbal na-elezi anya na, mgbe e mesịrị, ọ ga-ezuru ya n'otu ọnọdụ ahụ n'okpuru pyramid ka ọ chọtara waya ya n'abali! Nke dị egwu. ọ na-arụ ọrụ na-enweghị onye ọ bụla na-enwe ike ịkọwa ihe mere ma ọ bụ otú!
Nke a bụ n'ezie naanị otu echiche. ka ọkà mmụta sayensị na-ekwu. Mana o yiri ka ihe ọ bụla na-emetụta ihe dị iche iche na-eme na ọnọdụ dị iche iche dịka ọdịdị nke oghere ahụ si dị - Gịnị mere? Anyị amaghị kpọmkwem. Mana o doro anya na iji ụdị kwesịrị ekwesị, pyramid, na nke a. Anyị na-emezi ma ọ bụ na-eme ka usoro ahụ dị ngwa ... Gịnị kpatara Pyramid? Karịsịa, n'okwu banyere onye na-emepụta ihe na Prague, na ọnụ ọgụgụ nke Fero Cheops, n'Ijipt?
Modestly, Drbal, na Memoir. kweta na ọ bụghị. ka ọ bụrụ na ọ bụ mmalite nke nchọta. Na mmalite nke iri ise, ọ na-ekwu. onye njem nleta nke France (ee), Maazi Bovis, na-eleta pyramid Ijipt. N'ụlọ ụlọ nkwonkwo ahụ, otu eziokwu na-eme ka ọ gbanwee. Iru mmiri dị elu, ma ozu nke nwamba. ụmụ ahụhụ na anụ ọhịa, ma eleghị anya na-anwụ anwụ mgbe ha banyechara na ite. ha adighi adighi ire, ha na-ekwu okwu n'ezoghi ya. Bovis wee nwee mmeri ma ọ bụrụ na ejiji nke ili ahụ agaghị abụ maka ihe dị n'ime ya. Ekwuru na ndi nchu aja ndi Ijipt nwere ihe omuma na ayi agagh echeghari uche banyere ihe nke ihe ufodu, ihe oyiyi ma obu ihe di iche iche nke ike nwere ike igbanwe usoro okike dika nke decomposition nke organic okwu ...
(...) Enel na ya n'onwe ya kwubiri na ihe nile ederede, ihe owuwu, na ihe osise nke ụfọdụ omenala oge ochie rube isi n'iwu ndị a. Uzo, mpako, ihe di iche iche, nhazi ... ihe nile gbadoro ka ha weputa uzo zuru oke, nchikota zuru oke n'ime ohere nke ebe ufodu na ndi mmadu nwere ihe ndi ozo ... Ndi sayensi furu efu ma obu kpachapu anya zoro? A sayensị ma ọ bụ anwansi ma ha na-ezute ebe? ònye gaara enye Golden Number nke ihe ncheta kachasị nsọ nke yore? Ravatin ọkachamara na ụlọ ọrụ nyocha ya, ndị òtù Ark'All, na-eche ma ụdị ume ndị a adịghị ama na continuum ndị ọzọ karịa nke ndị ọkà mmụta sayensị anyị na-eche taa. Site n'emepụta ume site n'ụdị, mechie onye a ma ama bụ Soviet parapsychologist Sergeyev, ma eleghị anya anyị ga-aga n'ihu, ma ọ bụrụ na anyị maara karịa, karịa ọkụ ọkụ anyị niile na nuklia anyị. Enwere otutu ihe kpatara ihe omuma a iji furu efu. Ka o sina dị, onye ọ bụla, kwa ụbọchị, nwere ike iji ebili mmiri ndị a?
Dr. Serge V King bụ otu n'ime ndị ọkachamara na-eduzi ụwa na pyramid na ụlọ ndị ọzọ na-ebunye "ebili mmiri ma ọ bụ ike," ma ọ dị mma ma ọ bụ na-adịghị mma. Enweghi ezigbo ala na-enwe mmasị na Onan ikpe karịa ọ bụla ọzọ. nzube ya bu ihe omimi sayensi. O dere n'akwụkwọ ya bụ Pyramidal Energy Book ("Pyramid Energy Handbook" na French) ndepụta nke ihe pyramid nwere ike ịrụzu. Iwu ahụ adịghị mma (na ndepụta ahụ adịghị ezu):
Ube na-egbuke egbuke na cutlery;
Soften kọfị, tii na ụtaba
Nye mmiri mgbapụta uto mmiri mmiri;
Mee ka osisi too
Mee ka germination oge nke osisi;
Mee ka ihe ndozi dị mma
Mkpụrụ osisi Ripen na akwụkwọ nri;
Mee ka uto nke algae ghara idi ma gbochie nje bacteria;
Mee ka ikuku redio na telivishọn dị mma;
Mee ka amara ma mee ka ntụrụndụ dịkwuo uru;
Mee ka usoro ọgwụgwọ gwụ gị ma belata ihe mgbu
Mee ma wepu tarnish.